Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ukubanjwa kweCardiac: Ukuphucula amaxabiso okusinda
E-Singapore, i-1 kwi-3 isigulane sohlaselo lwentliziyo sinokufumana isiganeko senhliziyo esiphindaphindiweyo. Nangona ukuvuselelwa kwentliziyo kusisiseko sothintelo lwesibini, kuphela i-6% ukuya kwi-15% yezigulane ezifanelekileyo namhlanje ukuya kwiinkqubo zokuvuselela intliziyo.
I-Philips Foundation kunye ne-arhente yenkonzo yentlalontle yaseSingapore Heart Foundation (SHF) namhlanje ibhengeze intsebenziswano yokuphucula iziphumo zesiganeko senhliziyo kuluntu ngokwandisa ukufikelela kwimpilo yezempilo. Inkqubo yonyaka wonke yokuxhasa ngemali entsha ebizwa ngokuba “yi-SHF – iPhilips Foundation Heart Wellness Centre” ijolise ekunciphiseni izinga lokusweleka kwezehlo zentliziyo ubuncinane ngama-50% (xa kuthelekiswa nezigulana ezingathabathi nxaxheba) kunye nokunciphisa umngcipheko wokuba umntu esibhedlele. ukwamkelwa nge-25%.
I-SHF - i-Philips Foundation Heart Wellness Centre, iinkqubo zayo zokuvuselela kunye nokusebenza ziya kuxhaswa ngemali yi-Philips Foundation kunyaka ozayo, iya kujongana nale ngxaki kwaye iqhube inxaxheba ephezulu kwiinkqubo zokuvuselela ngokuvumela ukufikelela entliziyweni yoluntu.
I-SHF – iPhilips Foundation Heart Wellness Centre lelinye lamaziko amathathu aqhutywa yi-SHF abonelela ngeenkonzo ezixhaswa kakhulu zokubuyiselwa kwentliziyo. Ifumaneka kwiZiko leFortune (190 Middle Road), i-SHF - iPhilips Foundation Heart Wellness Centre ilungele izigulana zentliziyo kunye nabantu abasemngciphekweni ukuba bafikelele kwizixhobo zokhathalelo eziyimfuneko kunye nabasebenzi bezempilo ukugcina impilo yentliziyo yabo. Kweli ziko, abantu baya kungena kwiNkqubo yokuPhila kweNtliziyo, iSigaba se-3 kunye ne-4 yenkqubo yokuvuselela intliziyo, apho iingcali zezempilo ze-SHF ziya kunika isikhokelo kwiiklasi zokuzilolonga ezilungiselelweyo, ingcebiso ngesondlo, kunye nemfundo malunga nemikhwa ephilileyo yentliziyo-yonke. ezibalulekileyo kwiziphumo ezizezona zilungileyo zesigulana. I-SHF ixhasa abantu abamalunga nama-2,500 kumaziko ayo amathathu, abangama-675 kubo baseFortune Centre.
Ukubonelelwa ngenkqubo yokubuyisela intliziyo efikelelekayo kwiZiko leFortune kubaluleke kakhulu ekuphuculeni ukufikelela kukhathalelo lwabantu abadala, abadla ngokungashukumi kwaye banokuchaphazeleka ngakumbi kwizehlo zentliziyo yesibini. Ukuxhaswa ngemali yi-Philips Foundation kuya kunceda ukugcina iifizi ze-cardiac rehab eziphantsi kumalungu ukunciphisa ezinye izithintelo zangoku ezithintela ukufikelela ekunyamekelweni kwaye zibancede babambelele kwinkqubo yabo yokubuyisela.
Imfundo kunye nokubethelela ukuzithemba kwisenzo nako kuyinkalo ebalulekileyo yolu buhlakani. I-Lancet Public Health yafumanisa ukuba uchungechunge lwezempilo zoluntu eSingapore lwandise amathuba okuvuselela i-cardiopulmonary resuscitation (CPR) ngabantu ababukeleyo ngexesha lokubanjwa kwentliziyo ngaphandle kwesibhedlele (OHCA) phantse isibhozo, kunye namazinga okusinda ngokuphindwe kabini, egxininisa ukubaluleka ukungenelela okunjalo ukuphucula iziphumo ze-OHCA.
Olu bambiswano luya kubona kwakhona iindawo ze-20 zaseSingapore zixhotyiswe nge-defibrillators yangaphandle ezenzekelayo (i-Philips HeartStart AEDs) kunye nabantu abangama-500 abaqeqeshwe kwi-CPR + AED ngaphezu konyaka omnye ukwakha uluntu olulungeleyo noluzinzileyo oluxhotyiswe ngcono ukujongana neziganeko zentliziyo.